Kitra – «Live your goals» : entanina hilalao baolina ny vehivavy | NewsMada
Kitra – «Live your goals» : entanina hilalao baolina ny vehivavy
Anisan’ireo firenena nomen’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), tombony hisitraka amin’ilay tetikasa “Live your goals”, i Madagasikara. Fandaharanasa, hampirisihana sy hanentanana ireo ankizy vavikely sy tovovavy, hilalao baolina ary hiditra ao anatin’ity tontolon’ny mpanjakan’ny fanatanjahantena ity. Nampahafantarina omaly, teny amin’ny kianjaben’ny Mahamasina, ny fanombohan’izany tetikasa izany, izay haharitra efa-taona. Tovovavy 250, eo amin’ny 8 ka hatramin’ny 24 taona , avy amin’ny fikambanana telo, no nisantatra izany dia ny Sos Village d’enfants, ny Association 4FAAA ary ny ONG Zazakely.
Nampilalaovina tamin’ny fomba tsotra sy mahafinaritra izay miendrika fety izy ireo, toy ny fanaovana kisarisary, ny fikatrohana amin’ny baolina kitra, ny fampahafantarana mahakasika ny mpitsara baolina, ny fitondrana azy ireo manodidina ny kianja, ny fitsambikinana, ny fandakana baolina sy ny hafa marobe. 25 ireo mpanabe miaraka amin’izy ireo, amin’ity tetikasa ity izay avy amin’ny ekipam-pirenena Malagasy. Marihina fa efa nahazo fiofanana mahakasika izany izy ireo.
Tanjon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra sy ny komisiona misahana ny kitra vehivavy, ny hampitomboana araka izay tratra ny isan’ireo vehivavy, hiditra ao anatin’ny baolina kitra na ho lasa mpilalao na mpanazatra na mpitsara na mpitantana na mpanohana.